X ကိုလွင့်မျောနေသော (X Drifting)
သင်၏အရှိအတိုငျးမော်တော်ကားနစ်အိပ်မက်များတွေ့ဆုံဖို့ X ကိုနစ် Download နှင့်ပျံ့ဒဏ္ဍာရီဘုရင်ဖြစ်လာ!
ပြိုင်ပွဲဒုံးပျံ: parkour ပြိုင်ဘက် (Racing Rocket : Parkour Rivals)
wDrive များ: Extreme ကားယာဉ်မောင်း Simulator (wDrive: Extreme Car Driving Simulator)
Big မြို့သည်သင်တို့၏ကားများအဘို့အပွင့်လင်းပါ! megapolis လမ်းများပေါ်တွင် & Furious ကားတစ်စီးပြိုင်ကား!
Offroad moto ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ဂိမ်း (Offroad moto bike racing games)
Offroad moto ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ဂိမ်း - မာပြိုင်ကားအပုဒ်တလျှောက်သင့်ရဲ့အားကစားစက်ဘီးအတွက်အများဆုံးနဲ့အလုအယက်မှအရှိန်မြှင့်။ ဤ Android ဂိမ်းထဲမှာကြမ်းတမ်းမြေပြင်အနေအထားကိုဖြတ်ပြီးသွား